Ho an'ny Fitness
Fa Power Tool
Fahazoan-dàlana hody entana
Fomba fitakiana tsy mandeha
Staba Electric Co., Ltd. (fohy toy ny Staba) ny vokatra dia azo ekena fa tsy misy kilema amin'ny fitaovana sy ny asa-tanana amin'ny fampiasana mahazatra ao anatin'ny vanim-potoana fiantohana. Ny adidy amin'ny Warranty ho an'ny vokatra namboarina dia fehezin'ny fifanarahana misaraka fa tsy voarakitra ao amin'ity rakitra ity.
Vanim-potoana fiantohana: Amin'ny ankapobeny, Staba dia manome antoka 24 volana hatramin'ny datin'ny fandefasana. Raha tsy mitovy ny fe-potoana fiantohana ao amin'ny fifanarahana na faktiora tsirairay dia manjaka ny fe-potoana fifanarahana na faktiora.
Staba Andraikitra: Ny andraikitra tokana an'i Staba ao anatin'ny fiantohana dia voafetra ihany amin'ny fanamboarana ireo kilema amin'ny alàlan'ny faritra vaovao na nohavaozina, na fanoloana ireo vokatra kilema naverin'ny mpividy mivantana. Staba dia manan-jo hampiasa singa fanoloana ny peripheraly an'ny antoko fahatelo na ny singa tsy misy intsony amin'ireo mpamatsy tany am-boalohany.
Fanilihana ny Warranty: Tsy manana andraikitra i Staba vokatr'ireto tranga manaraka ireto, izay nanjary foana ny fiantohana ary mijanona tsy mihatra. 1. Ny vokatra dia hita fa tsy tomombana rehefa tapitra ny vanim-potoana fiantohana. 2. Ny vokatra dia nampiharina tamin'ny fampiasana tsy ara-dalàna, fanararaotana, tsy fitandremana, lozam-pifamoivoizana, fanovana, fanovana, na fanamboarana tsy nahazoana alàlana, na fanahy iniana na antony hafa. Ny fepetra toy izany dia hofaritan'i Staba amin'ny fahaizany irery sy tsy voafetra. 3. Ny vokatra dia simba noho ny loza na ny fepetra faratampony, na voajanahary izany na an'ny olombelona, ​​ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny tondra-drano, afo, fitokonana, na fikorontanan'ny herinaratra. 4. Ny laharana serial an'ny vokatra dia nesorina, novaina na namboamboarina. 5. Ny fiantohana dia tsy handrakotra ny fahasimban'ny kosmetika, na ny fahasimbana nitranga nandritra ny fandefasana.
Warranty mitatra: Manolotra fiantohana maharitra i Staba izay azo vidiana amin'ny solontenan'ny mpivarotra rehefa mametraka ny baiko ianao. Ny sarany amin'ny fividianana fiantohana maharitra dia mitombo, mifototra amin'ny vidin'ny fivarotana ny vokatra.
Mba hanampiana ny mpanjifa hanohy ny asany ara-dalàna faran'izay haingana ary hisoroka ny fandaniana amin'ny fitaovana izay tsy simba tokoa, dia dodona izahay hanampy anao amin'ny famahana olana lavitra ary hikaroka ny fomba rehetra hamahana ilay fitaovana tsy misy fotoana sy fandaniana tsy ilaina. ny famerenana ny fitaovana ho fanamboarana. Mitaky olana ny mpanjifa ary mifandray amin'ny solontenan'ny varotra Staba na ny fanohanana ara-teknika amin'ny fanomezana ny famaritana ny olana amin'ny antsipiriany amin'ny teny, sary, ary / na horonan-tsary. Staba dia manao ezaka faran'izay betsaka amin'ny famahana vahaolana.
Staba dia manaiky ihany ny fiverenan'ny mpividy mivantana. Raha sendra olana amin'ny vokatrao ianao dia miverena any amin'ny toerana novidinao.
Isa RMA: alohan'ny hamerenany ireo vokatra tsy mandeha, ny mpanjifa dia tokony hifandray amin'ny solontenan'ny mpivarotra anay amin'ny taratasy RMA miaraka amin'ny nomeraon-dalàna RMA, ary hameno sy handefa azy ireo any amin'ny solontenan'ny mpivarotra na info@stabamotor.com. Mariho fa ny isa RMA dia tsy maintsy aseho ivelany. Staba dia mety mandà ny hanome fanamboarana na fanoloana vokatra tsy misy RMA ary hamerina ny vokatra amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny fanangonana entana.
lany: Ny RMA dia manan-kery mandritra ny kalandrie telopolo (30) andro aorian'ny namoahan'i Staba azy. Ny mpanjifa dia tsy maintsy mamerina ny vokatra voalaza ao anatin'ny RMA ao anatin'ny telopolo (30) andro na mila RMA vaovao.
Fepetra takiana: Ireo vokatra naverina rehetra dia tsy maintsy fonosina araka ny tokony ho izy mba hisorohana ny fahasimban'ny fandefasana.
Famaritana ny toetran'ny Warranty: Vantany vao voaray ny vokatra dia mamaritra ny satan'ny fiantohana i Staba amin'ny fanamarinana ireo laharana andiany ary hamaritana ireo entana. Ny zavatra fiantohana dia tokony hamboarina na soloina raha tsy mifanerasera amin'ny mpanjifa. Raha toa ka mitaky fanamboarana ny singa tsy misy fiantohana dia andefasana ny mpanjifa endrika Estimation of Charges izay azon'izy ireo dinihina sy soniavina raha azo ekena. Ireo zavatra tsy manome antoka dia tsy hamboarina raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpanjifa. Raha raisina ho tsy azo amboarina ny entana dia mifandray ny mpanjifa ary manana safidy (1) mamerina ny vokatra na (2) manala ny vokatra.
Fanamboarana ny sarany: Ny entana azo antoka dia tokony hamboarina maimaimpoana. Ny entana tsy misy antoka dia tokony hiandraikitra ny saram-pitaovana sy ny fanamboarana ny sarany raha ilaina izany.
Fiampangana entana: raha misy fiantohana in-Warranty, ny mpanjifa dia handoa ny entana ao anatiny ny vokatra naverina ary Staba kosa dia handoa ny entana any ivelany ny vokatra namboarina na nosoloina ho an'ny mpanjifa; raha toa ka tsy misy fiantohana dia tokony handoa ny vidin'ny entana miditra sy ivelany ny mpanjifa.
Ireo fitaovana namboarina na nosoloina dia hotanterahina mandritra ny sisa tavela amin'ny vanim-potoana fiantohana tany am-boalohany na sivifolo (90) andro, izay lava kokoa. Ny politika dia mety hiova amin'ny fahaizan'i Staba irery ihany, amin'ny fotoana rehetra, tsy misy fampandrenesana mialoha.
Raha misy fanontaniana, fanontaniana na teny fiderana, dia antsoy azafady: 0086-137 9445 5099 na fenoy ity takelaka manaraka ity
Motor, Vacuum Cleaner, Motor tsy misy borosy, BLDC Motor, Brushless DC Motor, BLDC Fan Motor, fangatahana pricelist
No 87, Dongfu 4th Road, Dongfeng Town, 528425, Zhongshan, Guangdong, Sina.